Oweba awocansi uthi wayenqena ukuwakhokhela | News24
Oweba awocansi uthi wayenqena ukuwakhokhela
Florida - Ikhasimende lesitolo iWalmart eliboshwe ngoMgqibelo ebusuku ngokweba ithoyizi locansi, okokugcoba esithweni sangasese nendandatho yenduku lithe lalinqena ukuyikhokhela impahla elayifaka esikhwameni salo.
UTherasa Prine, 25, wabanjwa esephumile esitolo iWalmart esiku-St. Petersburg, ngokusho kwesitatimende.
OLUNYE UDABA: Owesifazane uboshelwe ukweba elocansi
Ngesikhathi uPrine ekhokhela enye imaphal ayeyithenga kusolwa ukuthi wayefuna ukukhuthaza amanye amathoyizi ocansi nokokugcoba uma ususenkonzweni.
UPrine wadedelwa ngebheyili yemali engu-$4250.